Community Archives - Shop
Shop > All Articles > Community
International Plastic Free Day – May 25th081
The KaungHtet May 4, 2022 5:53 pm May 10, 2022
ရာသီဥတုပူပြင်းပြီး ပြင်းထန်စွာဖောက်ပြားနေခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာမြေကြီးနေမကောင်းဖြစ်နေပြီဟု မီးမှောင်းထိုးပြလိုက်တဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုပါ။ အမိကမ္ဘာမြေကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ ပါဝင်ကယ်တင်နိုင်ဖို့ဆို ပလတ်စတစ်သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့် စတင်နိုင်ပါတယ်။ Shop App MM သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ E-commerce ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Shop App ကို …
စိတ်ကလေး အနားရရဲ့လား?057
ကျွန်ုပ်တို့ Shop App MM မှ Mental Health Awareness နဲ့ပတ်သက်ပြီး အလေးပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ Shop App အား Download ရယူရန်“ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ” ဒီရက်ပိုင်း အလုပ်တာ၀န်တွေ၊ အခက်အခဲ စိတ်ညစ်စရာတွေကြားက ဖြတ်သန်းရုန်းကန်ရင်းစိတ်ရော …
The Colors Tell About Your Personalities0122
The KaungHtet March 11, 2022 7:07 am March 11, 2022
Let’s dive into the colorful world of color psychology, today. Do you know the Characteristics of your personality can be …
နေ့စဥ်သုံး English Idioms များကို လေ့လာရအောင် …0302
The KaungHtet March 9, 2022 8:19 am March 9, 2022
ချိုချဉ်ငံစပ် အမွှေးအကြိုင် အနံ့၊ အရသာမျိုးစုံနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ English Conversation တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင် “Idiom” လို့ခေါ်တဲ့ ဥပစာဆိုရိုးစကားတွေက မပါမဖြစ်ပါ။ ဥပစာတွေက နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ ဒေသ၊ ဓလေ့ပေါ်မူတည်ပြီး အမျိုးအစားများစွာရှိသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာအနေနဲ့ဆို “ခဲတစ်လုံးနဲ့ ငှက်နှစ်ကောင်ပစ်”၊ …